Yintoni uthando? | Isiseko soMvuzo | Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya ubudlelwane Yintoni uthando?
Uthando, nokuba luyabathanda abanye okanye luyathandwa, lusenza sizive sinxibelelene, sikhuselekile, sigqibelele, sikhuliswa, sithembekile, sizolile, siphila, siyila, sixhotyisiwe kwaye siphelele. Ikhuthaze iimbongi, iimvumi, amagcisa, ababhali kunye nabefundisi bezenkolo ngamawakawaka eminyaka. Kodwa yintoni uthando? Nalu ulonwabo Ividiyo evakalayo loo nto isibonisa ukuba ijongeka kanjani sisenzo.
Yona yona nto ibaluleke kakhulu kuyo yonke into. Ngokuchasene noko ukwesaba, okubonakalayo kwiindlela ezininzi ezifana nentukuthelo, intukuthelo, umona, ukuxinezeleka, ukuxhalaba kunye nokunye.
Ukufumana uthando oluthe xaxa, kunceda ukwazi ukuba isifiso socansi kunye nothando, ngombono wokubambisana, ziveliswa ngamaqela amabini ahlukeneyo, kodwa anxulumene nengqondo. Sinokuziva sinamathele kumhlobo kodwa singenalo isifiso sobulili kuye. Singaba nomnqweno wesondo kumntu ongenamvakalelo. Ukulinganisela okunempilo kokubili umnqweno kunye nokubambisana kuyona nto isisiseko esona sithuba esideleleyo, esonwabileyo, ngokwesondo. Bobabini umvuzo wendalo.
Imivuzo yemvelo okanye eyona nto yintloko kukutya, amanzi, isondo, ubudlelwane obunothando kunye novelwano. Basisindise size siphumelele. Ukufuna le mivuzo kubangelwa ngumnqweno okanye isondlo nge-neurochemical dopamine. Imivuzo yemvelo isinika indlela yokuzonwabisa xa sisidla, siphuza, sinyusa, kwaye sikhuliswa. Iimvakalelo ezinjalo ezonwabisayo ziqinisa ukuziphatha ukuze sifune ukuphinda. Ubunzima ngokubanzi, ngakumbi xa luhlala ixesha elide, lusisusa. Yile ndlela esiyifunda ngayo. Ngolunye lwale migaqo iyafuneka ukuba usinde kwizilwanyana.
Iifoto zoonografi zixhaphaza umnqweno wethu wesifiso sobulili, ngakumbi kwiintsholongwane, ngaphandle kokunikezela ngothando kunye nokuthanda. Ukusebenzisa i-intanethi ye-intanethi kwixesha elide kunokukhokelela ekudakaleni kwaye likhoboka kwabanye abantu. Ukufunda indlela yokuthanda ukuzinza kubalulekile ekusebenzeni kwethu kwexesha elide.
Nasi isikhokelo esheshayo nesilula ukuqonda umsebenzi weengxaki ze-neurochemicals ezenza sizive sisithandwa. Ukhumbule ukubamba kwakho kokuqala?
Uthando Njengokuhlangana >>